အာဆီယံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Huang Xilian မှပြောကြားရာတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးသည် ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ကဏ္ဍသစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်
2019-07-30 00:00 source：
အာဆီယံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Huang Xilian မှ သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းမှုအား ဖြေကြားစဉ်။ Photo Credit: People’s Daily Online သတင်းထောက် Xu Wei
ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် အာဆီယံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး Mr. Huang Xilian သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော် ဂျကာတာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာထိပ်သီးဖိုရမ် ကျင်းပပြီးနောက်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အရှေ့အာရှပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး အစည်းအဝေး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) တည်ဆောက်မှု ရရှိခဲ့သည့်အောင်မြင်မှုများနှင့် တရုတ်-အာဆီယံဆက်ဆံရေး စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မီဒီယာသတင်းထောက်များ၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအား ဖြေကြားရာတွင် တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး သည် ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ကဏ္ဍသစ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မေး - ယခုနှစ် ဇူလိုင်လကုန်၊ သြဂုတ်လဆန်းမှာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမဲ့ အရှေ့အာရှပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပ မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်-အာဆီယံ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဟာ အရေးအကြီးဆုံး လှုပ်ရှားမှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ တရုတ်-အာဆီယံဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပေါ် ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာ? ယခုတစ်ကြိမ်ကျင်းပမဲ့ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေး အပေါ် ဘာတွေမျှော်လင့်ပါသလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် ပေးပို့ခဲ့တဲ့ သဝဏ်လွှာမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့အတိုင်း တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးဟာ ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ကဏ္ဍသစ်ကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဓိကအားဖြင့် အချက် “၅” ချက်မှာ တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအချက်အနေနဲ့ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းဟာ “ပိုမိုရှင်းလင်း” လာပါတယ်။ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် လမ်းကြောင်းထိန်းညှိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ တရုတ်-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ပြီး ပိုမိုရင်းနီးတဲ့ တရုတ်-အာဆီယံ ကံတူအကျိုးပေး လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ဖို့အတွက် သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်မှ ပြောကြား ခဲ့ပြီး တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ တရုတ်-အာဆီယံ နို်င်ငံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးမှာ《တရုတ်-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေး ၂၀၃၀ မျှော်မှန်းချက်》ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အနာဂတ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်းကြောင်းမြေပုံ ရေးဆွဲ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု “ပိုမိုမြင့်မား” လာပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမို များပြားလာပါတယ်။ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ အပြန်အလှန် လည်ပတ်ခြင်းအပြင် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးဌာန တာဝန်ခံတို့ဟာ ယခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိပ်သီးဖိုရမ်ကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်များအကြား အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် မတူညီမှုတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ပြင်ပနှောင့်ယှက်မှုတွေကို ဖယ်ရှားကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အတူတကွ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ “တောင်တရုတ်ပင်လယ် အပြုအမူကျင့်ဝတ် စည်းကမ်း” ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ပြင် လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို အတူတကွ ဆွေးနွေးသတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမ အကြိမ် ပင်လယ်ပြင်ပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက် မဟာဗျူဟာမြောက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုဟာ အရင်က မရောက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ စီးပွးရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ “ပိုမိုမြန်ဆန်” လာပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးနေတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားဝါဒ ကျင့်သုံး နေတဲ့အချိန်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်သွယ်ရေးပမာဏဟာ သမိုင်းတစ်လျှေက် အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈၇.၈ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူကာလကထက် ၁၄.၁% တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး တိုးတက်မှုဟာ မှတ်တိုင်သစ်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကျော်လွန်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၁.၈ ဘီလီယံ ရှိတဲ့အတွက် တစ်နှစ်လုံးအနေနဲ့ ဘီလီယံ ၆၀၀ ကျော် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ နှစ်ဖက် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာ အပြန်အလှန် အထောက်အကူ ပြုလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ e-commerce ၊ smart cities နဲ့ 5G စတဲ့ကဏ္ဍသစ်တွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ နှစ်ဖက်စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု “အကျိုးအမြတ်” မှာ ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်။
စတုတ္ထအနေနဲ့ ပြည်သူအချင်းချင်း ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းမှာ “ပိုမိုမြှင့်တက်” လျက်ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သွားလာတဲ့ လူအရေအတွက်ဟာ ၅၇ သန်းထိရှိပြီး အပတ်စဉ်တိုင်း တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ မြို့များအကြား လေကြောင်းခရီးစဉ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် ပြေးဆွဲပျံသန်းလျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ အကြီးဆုံး ခရီးသွားဧည့်သည် ရင်းမြစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုများပြားတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ပြည်သူများမှာ လည်း တရုတ်နိုင်ငံကို လာရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စာပေသင်ယူခြင်း ပြုလုပ်လာ ကြပါတယ်။ တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာနှီးနှောဖလှယ်ရေးနှစ်အတွင်း နှစ်ဖက်အနေနဲ့ ယနေ့ကျင်းပတဲ့ တရုတ်-အာဆီယံ မီဒီယာထိပ်သီးဖိုရမ်အပါအဝင် လှုပ်ရှားမှုပေါင်းများစွာကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ “တရုတ်-အာဆီယံ ပညာတော်သင်ဆု” ကို အတူတကွတည်ထောင်ပြီး တရုတ်-အာဆီယံ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေး မတိုင်မီမှာ အဆိုပါ ပညာတော်သင်ဆု ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ပထမဦးဆုံးအသုတ် ကျောင်းသားတွေဟာ စက်တင်ဘာလမှာ တရုတ်နိင်ငံကိုလာပြီး ပညာစတင်သင်ယူတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတော်သင်ဆု ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် နှစ်ဖက်လူငယ်များအကြား အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရေးအတွက် “စွမ်းအင်အသစ်” အဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပဥ္စမအနေဖြင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဝေါဟာရဟာ “ပိုမိုကျယ်ပြန့်” လာပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ်ကျိုးကုန်သွယ်ရေးဝါဒကို အတူတကွဆန့်ကျင်ပြီး 《ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသဘောတူညီချက်》(RCEP) ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုအား အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ကာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အပေါ် အခြေခံသည့် ဘက်ပေါင်းစုံကုန်သွယ်ရေးစနစ်အား အတူတကွ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အနေနဲ့ လန်ချန်-မဲခေါင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ တရုတ်-အာဆီယံ အရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးသည့် ဒေသ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အတူတကွ ဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံအဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်မှုအား အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အနေဖြင့် တံခါင်းဖွင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အပြန်အလှန် လေ့လာသင်ယူမှုအား အစွဲပြုကာ အရှေ့အာရှဝိသေသ ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်နှင့် ဒေသတွင်း ဘုံတန်ဖိုးအယူအဆအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မည် ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်အနေဖြင့် ဒေသတွင်းပြဿနာများတွင် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအာား တိုးမြှင့်ပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအား အတူတကွ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မရေရာ၊ မတည်ငြိမ်မှု မြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ယနေ့ နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသပတ်ဝန်းကျင်အတွက် တရုတ်-အာဆီယံတို့၏ ကောင်းမွန် သော ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ယခုအခြေအနေအတွက် စွမ်းအောင်းကောင်း တဲ့ လှိုင်းကောင်းဖြစ်နေပါသည်။
သမိုင်းရဲ့ အရေးပါတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်-အာဆီယံဆက်ဆံရေးဟာ ဒီထက်မက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Wang Yi ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အရှေ့အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေး ကို တက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးများနှင့်အတူ တရုတ်-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရေး၊ ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အရှေ့အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စတာတွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့ အရှေ့အာရှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးကို တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မှ တက်ရောက်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးတလည်ပြောကြားလိုတာာကတော့ ယခုတစ်ကြိမ် တရုတ်-အာဆီယံ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး အစည်းအဝေးဟာ အာဆီယံနဲ့ မိတ်ဖက် ၁၀ နိုင်ငံအကြား ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံခြား ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့အတွက် အာဆီယံအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အလေးထားမှုနဲ့ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက် အတူတကွ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ယခုတစ်ကြိမ် နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေး အောင်မြင်မှုများ ရရှိပြီး အရှေ့အာရှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဦးဆောင်နိုင်သည့် အရေးပါတဲ့ အစည်းအဝေးဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်အနေနဲ့ “ရပ်ဝန်း တစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) နဲ့ အာဆီယံအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်အကြား ဆက်သွယ်မှုအား မြှင့်တင်ရန်၊ နှစ်ဖက် မီဒီယာအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းအား တိုးချဲ့ရန်၊ Smart-cities တည်ဆောက်မှုနဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား မြှင့်တင် ရန်အတွက် ဘုံသဘောတူညီမှုများရရှိရန် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် နှစ်ဖက် အနေနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒနဲ့ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးအား ထိန်းသိမ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်အား မြှင့်တင်ရန်၊ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး တရုတ်-အာဆီယံ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပြီး တရုတ်-အာဆီယံ ကံတူအကျိုးပေး လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်မှုအတွက် အားအင်သစ်များ ထောက်ပံ့သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး - အာဆီယံဒေသဟာ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) တည်ဆောက်မှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) အဆိုပြုချက်ဟာ အာဆီယံမှာ ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပြီလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - အာဆီယံဒေသဟာ “၂၁ ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမကြီး” အဆိုပြုချက် စတင်မွေးဖွားရာ ဒေသဖြစ်ပြီး “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road” နိုင်ငံတကာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တဲ့ ဦးစားပေးဒေသနဲ့ အရေးပါတဲ့ မိတ်ဖက် ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံဒေသမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) အောင်မြင်မှုကို အချက် (၃) ချက်နဲ့ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
ပထမအချက်ကတော့ နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပါတယ်။ ယခုနှစ် ဧပြီလ မှာ အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးဌာန တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်း ကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိပ်သီးဖိုရမ်ကို စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ခဲ့ပါ တယ်။ အခုလို အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲကနေ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး စုံစုံညီညီ တက်ရောက်တာဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှာမှ တွေ့မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) အပေါ် အလေးထားမှုနဲ့ ထောက်ခံမှုကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်သီးဖိုရမ် အစည်းအဝေးမှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအကြား အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ “ရပ်ဝန်တစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်”(Belt and Road) တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဒေသတွင်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စသည်တို့ အတွက် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်း တစ်သွယ်”(Belt and Road) တည်ဆောက်မှုမှာ ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်လာပြီး အခြေခံအဆောက် အအုံကဏ္ဍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း စတဲ့ ကဏ္ဍတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များမှာ သိသာထင်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံများမှာ ဆောက်ရွက်နေတဲ့ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) ရဲ့ အရေးပါတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာ အသီးအပွင့်များ အဆက်မပြတ် သီးပွင့်လျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်-စင်္ကာပူ နိုင်ငံတကာကုန်းလမ်းရေလမ်းကုန်သွယ်ရေး Channel အသစ်မှာ ကနဦးကာလ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျကာတာ-ဘန်ဒေါင်း အမြန်ရထားလမ်း တည်ဆောက်မှု၊ တရုတ်-လာအိုရထားလမ်း တည်ဆောက်မှု၊ ဗီယက်နမ်နို်င်ငံ ဟနွိုင်းမက်ထရိုရထားလမ်း တည်ဆောက်မှု စတာတွေဟာ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်-Sihanouk ဆိပ်ကမ်း အမြန်လမ်းတည်ဆောက်မှု၊ တရုတ်-ထိုင်း ရထားလမ်း ဒုတိယအဆင့်လုပ်ငန်း Korat-Nong Khai လမ်းပိုင်း တည်ဆောက်မှုတွေကို တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တရုတ်-ဘရူနိုင်း ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းနဲ့ တရုတ်-ဗီယက်နမ် ကျောက်မီးသွေးသုံးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းတွေဟာ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်တော့မှာပါ။ တရုတ်-အာဆီယံ အခြေခံအဆောက်အအုံ အထူးသီးသန့် ချေးငွေအနေဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တင်ပြလာတဲ့ လျှပ်စစ်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်း အချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ Oversea Parks စတဲ့စီမံကိန်းပေါင်း ၅၅ ခုအတွက် ငွေကြေးပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။
တတိယအနေနဲ့ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံအကြား “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်းကို အသီးသီး ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အာဆီယံဟာ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) အဆိုပြုချက်နဲ့ အာဆီယံအလုံးစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်အကြား အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ခြင်းအား စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုကို စတင်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) နဲ့ အာဆီယံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာအကြား အထူးသဖြင့် 《အာဆီယံ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်းအလုံးစုံအစီအစဉ် ၂၀၂၅》မှာ တူညီတဲ့အယူအဆရှိပြီး ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ သတင်းအချက်အလက်၊ လူပုဂ္ဂိုလ် စတဲ့နယ်ပယ် ၃ ခု အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို အလေးထားကြပါတယ်။ နှစ်ဖက်အနေဖြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုကို တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင် မူဝါဒဆက်သွယ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး ချောမွေ့စေခြင်း၊ အရင်းအနှီးပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ ပြည်သူအကြား ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ် ခြင်း စတဲ့ကဏ္ဍတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အဆက်မပြတ် မြှင်တင်လျက်ရှိပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ အာဆီယံအကြား “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်”(Belt and Road) နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အလားအလာကောင်းများစွာရှိပါတယ်။ နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ အနာဂတ်ကာလ နှစ်ဖက်အကြား “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (Belt and Road) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေးဟာ ပိုမို မြှင့်မားပြီး ရေရှည်တည်တံ့ကာ အသီးအပွင့်များ ပိုမိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး - ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးဟာ အရှေ့အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာ အားလုံးအလေးထားတဲ့ အရေးကိစ္စများထဲကတစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေအနေကို ဘယ်လိုရှုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာ? ယခုရက် ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်နို်င်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင် ကြေငြာကာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တူးဖော်ခြင်းကို အပြစ် တင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Pompeo ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ပြောဆိုမှုတွေကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအရာရှိ Mr. Bolton မှလည်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ် ပြုမူဆောင်ရွက် နေတာတွေဟာ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်နေတယ်လို့ Twitter ကနေ တစ်ဆင့် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာများမှတ်ချက်ပေး ပြောကြားလိုပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ဖြေ - တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချက် ၃ ချက် အဓိကပြောကြားလိုပါတယ်။
ပထမဆုံး ပြောကြားလိုတာက တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေအနေအား တည်ငြိမ်ပြီး တိုးတက် နေပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြား အတူတကွ ကြိုးစားမှုအောက်မှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အခြေအနေဟာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ကာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို လိုလားကြတဲ့အလျောက် တောင်တရုတ်ပင်လယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာပါတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ နဲ့ အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးအကြားတွင် “ပဋိပက္ခဒေသ” အဖြစ်မှ နှစ်ဖက် ပင်လယ်ပြင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုရဲ့ “တိုးတက်မှုဒေသ” အဖြစ် ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ “အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ တရုတ်-အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Li Keqiang မှ “တောင်တရုတ်ပင်လယ် အပြုအမူကျင့်ဝတ်” ကို ၃ နှစ်အတွင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ တင်ပြခဲပြီး အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှု ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ “အပြုအမူကျင့်ဝတ်” ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိနေ ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တရုတ်-အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ သတင်းကောင်း ကြားရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံများ အကြား ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ သိပ္ပံသုတေသနလုပ်ငန်း၊ ငါးမွေးမြူးရေး၊ ပင်လယ်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ရေကြောင်းသွားလာမှု လုံခြုံရေး စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ လက်တွေ့ကျတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းအများအပြားကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အတွက် နှစ်ဖက် နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ “ပြင်ပနှောင့်ယှက်မှု” ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရာမှာ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှမဟုတ်ပဲ အခြားပြင်ပနိုင်ငံက စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ နိုင်ငံတစ်ချို့ဟာ “လွတ်လပ်စွာရေကြောင်းသွားလာရေး” ကိုဟန်ပြပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ် မှာ စစ်သင်္ဘောတွေ၊ စစ်လေယာဉ်တွေကို မကြာခဏ စေလွှတ်လျက်ရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံရဲ့ ရေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်ခြင်းတွေ၊ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်း စတာတွေ ဆောင်ရွက်နေပါ တယ်။ ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ချို့ဟာ အနာဂတ်မှာ “တောင်တရုတ်ပင်လယ်အပြုအမူကျင့်ဝတ်” ရဲ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအား ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက် “အပြုအမူကျင့်ဝတ်” ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကို နှောင့်ယှက်လျက်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်၊ Mr. Pompeo နဲ့ Mr. Bolton တို့ ရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ချို့ဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို မလိုလားကြပါဘူး။ လိုက်လံနှောင့်ယှက်၊ ဖျက်ဆီးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေဟာ အမှန်တရားကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ပဋိပက္ခကြီးထွားစေဖို့အတွက် “တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ရေနံနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ခြိမ်းခြောက်သည့် နည်းဖြင့် တားမြစ်လျက်ရှိပါတယ်” ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြား စိတ် သဘောထားကွဲလွဲအောင် သွေးထိုးလျက်ရှိပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လှည့်ကွက်ထဲ မဝင်ရောက်မိစေရန် သတိကြီးစွာ ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြင်ပဒေသက နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမှုကို အတူတကွ ကာကွယ်ပြီး ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို မိမိ လက်ဝယ်ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းကိစ္စရပ်တွေကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကနေပြီး အတူတကွ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်းအေးချမ်းရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး - လက်ရှိ တရုတ်-အမေရိကန်အကြား ကုန်သွယ်ရေးပဋိပက္ခကို အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လေ့လာစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ကုန်သွယ်ရေး ကာကွယ်ရေးဝါဒအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ အဲ့အပေါ် ဘယ်လိုရှုမြင် ပါသလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - တရုတ်-အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးပဋိပက္ခနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး အချက် ၄ ချက် ပြောကြားလိုပါတယ်။
ပထမအချက်အနေနဲ့ အမေရိကန်နို်င်ငံက စတင်ခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဟာ နောက်ဆုံးမှာ မိမိကိုယ်သာ ထိခိုက်နစ်နာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တစ်လော ကိန်းဂဏာန်းအချက်အလက် များအရ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် စတင်ခဲ့တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာသလို ဖြစ်နေပြီး “သူတစ်ပါးကို ၈၀၀ ဆုံးရှုံးစေတဲ့အချိန် မှာ ကိုယ့်ဖက်က ၁၀၀၀ ဆုံးရှုံး” နေတဲ့အတွက် အမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဟာ ထိခိုက်နစ်နာလျက်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကဏ္ဍအသီးသီးက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေဟာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်ရေးဝါဒအပေါ် ဆန့်ကျင့်မှု တစ်နေ့တစ်ခြား မြှင့်တက်လျက်ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီက သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာမြို့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တန်းတူညီမျှခြင်းနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအပေါ် အခြေခံသည့် စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု ပြန်လည်စတင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်ပို့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအပေါ် အခွန်အသစ် တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်း ထပ်မံမပြုလုပ်ဖို့ အမေရိကန်က သဘောတူညီခဲ့ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ကတိကဝတ်ကို လေးစားလိုက်နာပြီး နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်ဆောင်တွေရဲ့ ဘုံသဘောတူညီမှုကို လိုက်နာကာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ ကုန်သွယ်ရေးပဋိပက္ခတွေကို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အတူတကွ ဖြေရှင်းဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒဟာ အခြားမသက်ဆိုင် တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ အမေရိကန်ကနေပြီး ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒနဲ့ ကိုယ်ကျိုးကုန်သွယ်ရေးဝါဒ ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အပေါ် အခြေခံတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကို ထိခိုက်စေပြီး ဒေသတွင်း ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကွင်းဆက်နဲ့ ပံပိုးမှုကွင်းဆက်ကို ရှုပ်ထွေးစေကာ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာ စေတဲ့ အဖျက်အမှောက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်သာမက အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် ပိုမို များပြားတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒ ပစ်မှတ်အနေနဲ့ တရုတ် နိုင်ငံသာမက ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း စတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်း ပါဝင်ပါ တယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒအပေါ် စိုးရိမ် ပူပန်လျက်ရှိပါတယ်။
တတိယအချက်အနေနဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ်ကျိုးကိုယ်သွယ်ရေးဝါဒအပေါ် ဆန့်ကျင် လျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒရဲ့ အဓိကပါဝင်သူနဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးဝါဒ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အလေးထား စောင့်ကြည့်ကာ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပါတယ်။ ယခုနှစ် မေလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ အရှေ့အာရှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြင့်အရာရှိအစည်းအဝေးမှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ ကိုယ်ကျိုး စီးပွားရေးဝါဒအား ဆန့်ကျင်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံဝါဒအား ကာကွယ်ရန် တစ်ညီတစ်ညွှတ်တည်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်က ကျင်းပခဲ့သည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒအပေါ် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ကြိမ်ကျင်းပမဲ့ အရှေ့အာရှ နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးအစည်းအဝေးမှာလည်း ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပိုမိုအားပါပြင်းထန်တဲ့အသံ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ RCEP ဟာ ကုန်သွယ်ရေးကာကွယ်မှုဝါဒကို ဆန့်ကျင့်ဖို့အတွက် ဒေသတွင်း အရေးပါတဲ့လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေးဝါဒကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် အတွက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အပြန်အလှန် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဒေသတွင်း လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးပေါင်းစပ်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဟာ RCEP ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ပိုမိုလိုလားလာကြတဲ့အတွက် ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဟာ လက်တွေ့ကျတဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ RCEP ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှာ အာဆီယံရဲ့ အရေးပါမှု ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆက်လက်အားပေးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှု ပြီးမြောက်ဖို့အတွက် အားလုံးနဲ့အတူတကွ ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှာပါ။ မကြာမီ ကျင်းပမဲ့ RCEP ရဲ့ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနဲ့ ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးမှာ တရုတ် နိုင်ငံအနေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အသီးအပွင့် ရရှိစေဖို့အတွက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ကုန်မှာ ညှိနှိုင်မှုပြီးမြောက်စေဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။